ओलीलाई रुझाउन बालुवाटारमा माफियाको सरसफाई !
ARCHIVE, POLITICS » ओलीलाई रुझाउन बालुवाटारमा माफियाको सरसफाई !
काठमाडौं - फागुन ३ मा बामगठबन्धनबाट दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियुक्त भएको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरे । तर ओली बालुवाटार सर्नुभन्दा अघि माफियाहरु लाखौ खर्च गरी बालुवाटारको सरसफाई गरेको तथ्य खुलेको छ ।
४ फागुनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटार छोडेका थिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार छाडेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सरकारी खर्चमा बालुवाटार सरसफाई हुने गरेको छ । तर ओलीको आगमणमा ५० लाख खर्च गरी माफियाहरुले बालुवाटार सरसफाई गरेको तथ्य खुलेको छ ।
एमाले सरकारमा भएका बेला लाभ लिदै आएका यति एयरलाइन्सका मालिक आडछिरिड शेर्पाले बालुवाटार सरसफाई गर्न लगाएका हुन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवाले बालुवाटार छोड्नुभन्दा दुई दिन अघिदेखि उनले सरसफाई थालेका थिए । ओलीका नाममा बालुुवाटारले पनि सरसफाई गर्न दिएको स्रोतले बताएको छ ।
भूकम्पपछि एमाले मुख्यालय बल्खु भत्कियो । पार्टी कार्यालय भत्किएपछि धुम्वाराहीस्थित पासाड ल्हामु प्रतिस्ठानमा एमाले कार्यालय सार्ने पनि शेर्पा नै हुन् । पार्टी कार्यालयलाई घर दिएवापत उनले आफ्नै नातेदार कृपासुर शेर्पालाई पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री बनाए । कृपासु्रले यति एयरलाइन्सलाई कारवाहीबाट जोगाएर करौडौ नाफा कमाए ।
प्रकाशित : Friday, March 02, 2018